Imba>Our Services>Chirongwa Chekushandisa>BBK
Break Bulk Container, inonzi BB mudziyo (IMWE KANA KUTI MORE FUKU RASI SEBED) inzira yakasarudzika yekufambisa pakati peOGOG nemidziyo yakawanda.
Kana iyo inorema uye inopfuura-saizi nhumbi ichiiswa mune imwechete furemu mudziyo apo nzvimbo yekusimudza yakavharwa kana kuvapo kwezvinhu kunze kwechiteshi kusimudza kukwirira muganho, pamusoro-huremu hwakawanda kupfuura hwakawanda mutoro weimwe chete OOG mudziyo, ticha tora nzira iyi.
Semuenzaniso, kana iyo cargos inopfuura 4.5m kuwanda uye 11.8m kureba uye huremu hunodarika hwakawanda mutoro weOOG imwe chete kana chigadziko chemafuremu, saka kazhinji mutengo wekurembera unenge uchidhura kwazvo. Nekudaro, Sohologistics inosarudza kushandisa BBK, saka kazhinji kazhinji kushandisa akati wandei emabhokisi akati sandara akasanganiswa kuita hombe "pallet" uye aya marudzi makuru akakurisa akasungirirwa pane iyi "pallet".
Yakatsanangurwa BBK mashandiro maitiro ndeye:
Kutanga, tumira isina chinhu chakapetwa mudziyo kudoko. Tevere, ronga kuendesa mushure mekutumira terminal terminal kudzidziswa uye wozotumira zvakananga kune wharf crane (padyo nemidziyo). Uye mushure mekunge midziyo mizhinji yekutakura zvinhu yagadzirira pabhodhi, makwiza ekusimudza anotanga kusimudza midziyo isina chinhu yakapinda mubhodhi uye kuita kuti midziyo iyi iite pekupedzisira uye vozoisa mutoro vachisimudza kumahombekombe makuru ekugadzira zvinhu. Aya marudzi e cargos anowanzoiswa padenga repamusoro uye hapachina mimwe midziyo inogona kuwedzerwa pairi.
Nhanho 1: Kusimudza isina chinhu yakadzika tafura pabhodhi (max kusvika 4 * 40'FR kwenguva imwe)
Nhanho 2: Heavy cargos yakasvika padoko uye yakamirira kusimuka
Step3: Kusimudza heavy cargos mubhodhi
Nhanho 4: Kugadzirira kusunga nekusimbisa pabhodhi
Nhanho 5: Yekusimbisa ruzivo ratidza
Ndezvipi zvakanakira BBK?
BBK inotakurwa nemidziyo yemidziyo inovhara akawanda emahombekombe makuru epasirese. Iyo nguva yekufamba nechikepe uye nguva yekuendesa yakatarwa uye mwero wekukuvara wakadzikira.
Ndeapi mazwi ekufambisa eBBK?
BBK ichatora mazwi ehukoko-ku-hook, ndiko kuti mutakuri achave nebasa redzimotokari panguva iyi kubva pakuisa kusvika pakuburitsa. Kuti uwane imwezve tsananguro, inonyatso kureva nguva kubva kumotokari dzinokochekera pamakireni kusvika pakuburitsa makoko emakona. Inoshandiswa mu bb CARGO, zvinoreva kuti muridzi wengarava ndiye ane basa rekusimudza nekusimudza ngarava pachiteshi chekupakata nekututunura pachiteshi chekuenda kusingabhadharwe mari yekukwirisa nekuchengetedza nzvimbo.
Nzira yekuita tsika yekubvumidza yeBBK?
Zvinoenderana nemakambani anotumira. Vazhinji vevaridzi vengarava vanoda kuzivisa ese makontena manhamba ekuregedza kwetsika nepo vamwe vachingoda imwe yeimwe nhamba yemudziyo.
Nzira yekuronga BBK Mukati?
Chekutanga, ngarava dzemidziyo dzinoumba marongero epamoyo mukati. Tevere, ronga kuendesa mushure mekutumira terminal terminal kudzidziswa uye wozotumira zvakananga iyo cargos uye isina chinhu chakadzika mudziyo pamwe chete kune wharf crane (padyo nemidziyo). Uye mushure mokunge midziyo mizhinji yekutakura zvinhu yagadzirwa mubhodhi, makraneti ekusimudza anotanga kusimudza midziyo isina chinhu yakapinda mubhodhi.